Sidina avy any Hawaii mankany Samoa Amerikanina amin'ny Hawaiian Airlines izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Sidina avy any Hawaii mankany Samoa Amerikanina amin'ny Hawaiian Airlines izao
Airlines • Airport • Vaovao farany momba an'i Samoa Amerikanina • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Hawaiian Airlines dia manohy ny serivisy tsy an-kijanona eo anelanelan'ny Daniel K. Inouye any Honolulu sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Pago Pago miaraka amin'ny fiaramanidina Airbus A330.
Hawaiian Airlines dia manohy ny sidina mankany Samoa Amerikanina.
Hanolotra sidina roa isam-bolana ny Hawaiian Airlines.
Ny zotra Hawaii mankany Samoa Amerikanina dia hotompoin'ny fiaramanidina Hawaiian Airlines Airbus A330.
Mifandray indray ny Hawaiian Airlines Honolulu (HNL) ary Samoa Amerikanina (PPG) amin'ny alàlan'ny fandefasana sidina tsy an-kijanona eo anelanelan'ny Hawai'i sy ny Teritori Amerikanina amin'ny herinandro ambony. Hawaiian, izay nampiato ny serivisy HNL-PPG indroa isan-kerinandro tamin'ny fiandohan'ny aretin'ny COVID-19 tamin'ny martsa 2020, dia hanolotra sidina roa isam-bolana manomboka ny alatsinainy hatramin'ny 20 desambra.
"Faly izahay fa hamerina an'i Samoa Amerikanina ao anaty tamba-jotra ary handray ireo vahiny izay niandry tamim-paharetana ny sidina hanombohana indray," hoy i Brent Overbeek, filoha lefitra misahana ny fandrindrana ny tambajotra sy ny fitantanana ny vola miditra ao amin'ny Hawaii Airlines. “Amin'ny maha mpifanolo-bodirindrina amin'ny nosy Pasifika anay, dia fantatray fa miankina betsaka amin'ny serivisinay ny vahininay ary manantena ny hampifandray tsara ny fianakaviana sy ny namana izahay.”
Hawaiian, izay manome ny hany rohy fandefasana rivotra tapaka eo anelanelan'ny gadra nosy roa, nijanona sidina nandritra ny 17 volana noho ny fangatahan'ny governemanta Samoa Amerikanina. Tamin'ny 13 Janoary, nanomboka nanamboatra andiana sidina fampodiana an-tanindrazana ny Hawaii mba hitondra any Samoa Amerikanina mponina an'arivony maro izay tafalatsaka an-trano tany Hawaii, ny tanibe amerikana ary ny sisa.
Ireo mpitsangatsangana any Samoa Amerikanina dia tsy maintsy manaraka andiam-panazavana momba ny fahasalamana sy fiarovana ny governemanta, ao anatin'izany ny porofon'ny vaksiny sy ny valin'ny fitsapana mialoha ny dia lavitra. Misy antsipiriany misimisy ao amin'ny tranokala TALOFApass. Ny vahiny manidina mankany Hawaii dia takiana mba hamorona kaonty Hawai'i Safe Travels ka hametraka ny karatra fanaovana vaksiny na ny fitsapana mialoha ny dia tsy tsara hialana amin'ny karantina rehefa tonga.
Hanohy hiasa ilay zotram-piaramanidina amin'ny alàlan'ny fiaramanidin'ny Airbus A278 miisa 330 seza i Hawaii.